Neymar Oo Tilmaamay Labada Kooxood Ee Looga Baqayo Ku Guulaysiga Tartanka Champions League – Kooxda.com
Home 2018 February France, Ingiriiska, Wararka Maanta Neymar Oo Tilmaamay Labada Kooxood Ee Looga Baqayo Ku Guulaysiga Tartanka Champions League
Neymar Oo Tilmaamay Labada Kooxood Ee Looga Baqayo Ku Guulaysiga Tartanka Champions League
Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Brazil ee Neymar ayaa tilmaamay laba kooxood oo halis weyn ku ah champions league kuwaas oo ku guulaysan kara.
Neymar iyo Asxaabtiisa ayaa maanta maraya tijaabo adag iyaga oo la ciyaari doona kooxda difaacanaysa tartanka champions league kuna guulaysatay labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay.
Si kasta ha ahaatee Neymar ayaa kooxaha Man City iyo Paris Saint-Germain halis weyn ku yihiin champions league kuna guulaysan karaan xilli ciyaareedkan.
Neymar ayaa sheegay in ayna kooxdiisa Paris Saint-Germain iyo Kooxda uu hogaamiyo Pep Guardiola ee Man City ay tartanka bilaa khibrad ka yihiin laakiin dhulka ku dhigi karaan ama uga badin karaan kooxaha awooda iyo khibrada ku leh gaajada ay u qabaan ku guulaysiga tartanka.
Hogaamiyayaasha Horyaalka ee Paris Saint-Germain oo dhibco badan ku haya hogaanka horyaalka France ayaa lugta 1-aad ee wareega 16-ka la ciyaari doona Real Madrid 24 saac kadib markii ay City xasuuq u gaysatay kooxda Basel.
“Waxa aan aaminsanahay in anaga iyo Man City si khatar ah naloo qaato”ayuu yiri.
“Waxa jirta isku ekaansho u dhexeeya kooxaha PSG iyo Man City laga yaabee inaysan taariikh u laheyn Champions League sida kooxaha kale- lakiin labada mashruuc ayaa leh hamigooda inay ku guuleystaan ​​islamarkaana abuuraan taariikh”.
“Waxa ku jira kooxaha sida Madrid,Barcelona iyo Bayern Munich kuwaas oo taajir ka ah taariikhda tartanka sanad walba si weyn loogu saadaaliyo in ay ku guulaysanayaan”.
Real Madrid ayaa ceyrsaneysa ku guulaysigii seddexaad ee Champions League oo xirir ah, lakiin waxa ay ku dhibtoonayaan booska afaraad ee La Liga, iyadoo 17 dhibcood ka dambeysa kooxda ay xafiiltamaan ee Barcelona waxana ay ka hareen tartanka Copa del Rey oo ay ka reebtay kooxda Leganse.
“Qaab ciyaareedka Real Madrid ee La Liga ayaan waxba ahayn, hadaatan ayay ka khatarsan yihiin wakhti kasta waayo waxa ay haatan muhiimada saarayaan champions league”ayuu sii raaciyay.
“Waxa laga yaabaa in ayna joogin meeshii ay ka filayeen Horyaalka La Liga, laakiin waxa jirta sababtii ay labada jeer ee isku xigta ugu guulaysteen tartanka champions league, sababtuna waxa ay tahay waxa ay haystaan xiddigaha ugu fiican adduunka iyo waliba tababaraha ugu fiican”
“Taas ismay badalin Walina waxa aan u ixtiraamaynaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican sababta way yihiin”
Filed in: France, Ingiriiska, Wararka Maanta